Maitiro ekutora Mhenyu Mapikicha kubva kuFaceTime app muIOS 11 | IPhone nhau
Aya madhiragi ekushanda eIOS 11 achagadziriswa zvishoma nezvishoma sekuvandudzwa kunoitika. Iyo yeruzhinji vhezheni 11.0.1 yakabuda mazuva mashoma apfuura kune vese vashandisi uko zvakaonekwa kuti yakagadzirisa zvimwe zvikanganiso, kunyanya kutsetseka pamidziyo yese. Nhau dzichasvika muIOS 11.1, iyo vhezheni yacho yatove mumaoko evanogadzira mune beta fomu.
IOS 11 Apple yaedza kuyedza kugadzirisa pfungwa yatiinayo nezveIpad asi yakasanganisirawo zvimwe zvitsva izvo, kune vamwe, zvinogona kunakidza pakati pazvo mukana wekutora Mhenyu Mifananidzo zvakananga kubva kuFaceTime, sekureba sekunge vaviri vashandisi vaine iOS 11 kumaterminal avo.
IOS 11 inotora mifananidzo inofamba, Rarama Mapikicha, iri nyore
Kune avo vasingazive, Raramai Mifananidzo Iwo mhando yemifananidzo iyo Apple yakabvumidza kutora kune dzimwe shanduro. Ivo akakosha nekuti kamera inozvitora yega nguva isati yatanga uye mushure mekubata mufananidzo watinowana, saka tine vhidhiyo diki yekuteedzana.
Kusvika parizvino, kuvabata zvaive zvakakodzera kuti chishandiso chakavhurwa kubva kuKamera app, asi neIOS 11 isu tine nzira nyowani yekuzviita: kubva kuFaceTime.
Kune izvi, zvinodikanwa kuti vese vashandisi vanogadzira hurukuro neFaceTime vane iOS 11 yakaiswa pamidziyo yako, kunyangwe iri iPhone kana iPad.
Ipapo, pazasi, iwe uchaona matatu matatu: kuruboshwe bhatani rekamera, pakati bhatani rekusungirira iyo kufona uye, pakupedzisira, kurudyi icon iyo yatichatamisa maikorofoni yedu.
Kubata LivePhoto tora paikoni pane kuruboshwe.
Chinhu chete chinokanganisa ndechekuti mumwe mushandisi Iwe uchagamuchira chiziviso chekuti isu takatora iyo Live Photo iwe. Kuti utarise mufananidzo watakagadzira, isu tichafanirwa kuenda kuIOS 11 Photo Reel uko kwaizowanikwa. Uye zvakare, iyo chifananidzo chinogona kugovaniswa pamasocial network edu seWhatsApp kana Teregiramu, kuishandura kuita GIF.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekutora mhenyu Mapikicha kubva kuFaceTime app muIOS 11
ndiregererei asi idzodzo inhau dzekunyepedzera, handisi kuona zvinobatwa pachangu
ndine ios 11
Pindura kuna Odysseus